IQOption » Sata teknika
Ity tabilao namboarina ity dia iray amin'ireo fitaovana fanaovana pirinty HTML5 mandroso indrindra misy ankehitriny. Azonao atao ny misafidy safidy marobe amin'ireo tondro ara-teknika ary manakaiky ny fitaovana 5000 mba hanangonana tabilao mifantoka amin'ny fitaovana iray na hamoronana tabilao tokana mampitaha fitaovana marobe.
Fifanakalozana amin'ny tabilao fandinihana teknika
Ny famakafakana ara-teknika dia fomba iray ampiasain'ny mpivarotra sy mpampiasa vola maro hamaritana ny lalana maharitra amin'ny tahiry na fananana tsena hafa. Amin'ny fampiasana mahazatra, ny tabilao famakafakana teknika dia noforonina mba hampisehoana ny isan'ireo isa vidiny manaraka ny axis x rehefa mandeha ny fotoana, izay azo ampiasaina hanondroana fironana na lamina. Misy karazany maro ny tabilao fandalinana teknika ampiasaina amin'ny tsenambola ankehitriny; na izany aza, ny malaza indrindra dia ny tabilao famakafakana ara-teknika amin'ny fampiharana ankapobeny fantatra amin'ny anarana hoe "Basics Basics".
Ny tena fototry ny tabilao fandalinana teknika dia ny tabilao fisotroana, izay matetika kokoa noho ny tsy ny tabilao voalohany ampidirina mpivarotra vaovao. Ireo tabilao ireo dia be mpampiasa satria tsotra takatra sy mora adika. Ny stock na ny tsena dia misy loko miaraka amina bara iray manokana; , ohatra, raha mijery bara manga ianao, midika izany fa miakatra ny tahiry iray manokana, ary raha mijery bara manga iray ihany ianao nefa mena, dia midika izany fa maty ny tahiry. Ny Chart Basics dia mampiseho ihany koa ny haben'ny zana-kazo tsirairay, arakaraka ny hitomboan'ny bara no zava-dehibe kokoa.
Mandritra ny tabilao famakafakana ara-teknika amin'ny antsipiriany kokoa, hitantsika ny tabilao tsipika, izay antsoina koa hoe tabilao andalana. Ireto tabilao famakafakana ara-teknika ireto dia tena atolotra ho an'ireo mpivarotra vao manomboka sy mpampiasa vola, satria manome fahitana bebe kokoa momba ny vidin'ny tahiry ankehitriny izy ireo. Mifindra amin'ny andalana iray mankamin'ny manaraka, dia azonao atao ny mahita ny fihetsiky ny vidiny, ary ny fomba mety hiova amin'izy ireo atsy ho atsy. Lafiny iray lehibe manamarika rehefa mampitaha ireo tabilao ireo amin'ny tabilao bar dia ny fiakatry ny tsipika amin'ny ankapobeny dia manondro ny fihetsiky ny tahiry na ny vidin'ny tsena rehefa mandeha ny fotoana ary tsy apetraka amin'ny vato. Ny zava-misy fa mihena ny vidin'ny tahiry dia fampisehoana fa mihelina ny fiakarana midina ary mety hiodina ao anatin'ny fotoana fohy. Mifanohitra amin'izany, ny fiakarana any ambony dia afaka manondro fa ny vidin'ny stock dia antenaina hiakatra ato ho ato.
Ny karazan-tabilao famakafakana teknika hafa dia ny tabilao fisotroana, izay tabilao fisotroana mihintsy, ary ny tabilao labozia, izay tsorakazo na fantsona fotsiny mampiseho ny tahiry, ny vola na ny vidin'ny entam-barotra hafa. Na izany na tsy izany, ireo tabilao roa ireo dia manolotra fampahalalana ilaina amin'ny mpampiasa vola. Ny tabilao Candlestick dia sarobidy indrindra ho an'ireo mpivarotra manantena ny hahazo tombony be amin'ny fiovan'ny fotoana fohy amin'ny vidiny. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny lamina labozia dia famerenana ireo fironana teo aloha. Ho fanampin'izany, zava-dehibe ny fanekena fa azo avadika ireo tabilao ireo. Amin'ity tranga ity, ny bandy ambony na ambany amin'ny tabilao dia azo averina, ary ny lokon'ny labozia dia manondro ny lalana halehan'ny fironana.
Raha manolotra fampahalalana sarobidy ho an'ireo mpivarotra ny tabilao famakafakana teknika, maro ireo mpivarotra vaovao sy efa za-draharaha no mampiasa karazana tondro teknika hafa handraisana fanapahan-kevitra. Ny karazany roa lehibe amin'ny fanadihadiana ara-teknika dia ny fanadihadiana ara-teknika sy ny fanadihadiana ifotony. Ireo karazana fandalinana roa ireo dia mety hamokatra mari-pamantarana azo antoka, fa ny mpivarotra kosa manana ny fahaizany mandanjalanja rehefa mifidy ny roa. Afaka mifidy ny hanambatra ny iray na ny iray ny mpivarotra, na ny karazana tondro ara-teknika iray ihany no azon'izy ireo ampiasaina.
Tombontsoa amin'ny fampiasana ny Sata fandalinana teknika
Ny fanadihadiana ara-teknika dia manana tombony maromaro, izay mahatonga azy io ho safidy malaza amin'ireo mpivarotra efa za-draharaha. Voalohany, manome haavo sy ambany ambany azo antoka kokoa noho ny famakafakana ifotony, izay mahatonga azy io ho fomba tianao indrindra amin'ny famakafakana ny angon-drakitra sy ny angona varotra entam-barotra hafa. Rehefa mampiasa famakafakana ara-teknika, ny mpivarotra dia miankina amin'ny fahaizany mamaky takelaka tsotra na tabilao labozia ary mandray fanapahan-kevitra miorina amin'ny vaovao eo amin'ny tabilao. Ity fomba ity dia manolotra fahamendrehana avo lenta kokoa noho ny famakafakana ifotony, satria ny mpivarotra dia miantehitra amin'ny volavolainy momba ny lamina manokana na ny hetsiky ny vidiny. Amin'ny lafiny ratsy, tsy misy mahasolo ny mpivarotra efa za-draharaha, izay afaka mihetsika haingana amin'ny fiovan'ny fironana.
Tombony iray hafa amin'ny teknika famakafakana teknika ny fampiharana azy mora foana. Azo ampidirina ao anaty rafitra varotra izy io, izay midika fa ny mpivarotra rehetra dia afaka mampiasa azy io na inona na inona fari-piainany. Ireo tabilao ireo dia azo havaozina ihany koa amin'ny angon-drakitra fifanakalozam-bola avy any ivelany, noho izany ny mpivarotra dia hanana fampahalalana vaovao hatrany momba ireo tondro ara-toekarena lehibe. Ireo tabilao ireo dia sariaka be mpampiasa, ary na ny vao manomboka aza dia afaka mahatakatra azy ireo mora foana.
Tombony iray hafa amin'ny fitaovan'ny hloc ny fahafahany manome vahana fifanakalozana fifanakalozana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitambaran'ireo tondro ara-teknika, ny algorithm hloc dia afaka mandika ny angona, ary manasongadina ny fitoviana hahitana fironana matanjaka. Izy io koa dia afaka mamantatra ny fahalemena amin'ny stock stock manokana, izay mety manondro fironana mihodina. Ireo tabilao ireo dia ahafahan'ny mpivarotra manararaotra ny fiovan'ny vidiny vetivety amin'ny alàlan'ny fanodinana amin'ny fironana matanjaka sy ny fahalemen'ny stockan'ny tsirairay, ary koa amin'ny entam-barotra lehibe.
← Vata famintinana ara-teknika ara-potoana BANNERS IQ OPTION →